Kismaayo News » Injineer Canshuur waxaa la diley isagoo doonaya in uu dalkiis wax taro
Injineer Canshuur waxaa la diley isagoo doonaya in uu dalkiis wax taro
Kn: Cabdullaahi Cali Canshuur wuxuu ahaa injineer ku taqasusey naqshadaynta magaalooyinka iyo dajinta adeegyada muhiimka ah ee dowladdaha hoose, wuxuu aqoonta ka gaaray illaa shahaadada Masters-ka.
Ka hor intii uusan Soomaaliya ku laaban wuxuu la kulmey qoyskiisa guri ku yaala xaafadda Brooklyn, Minnesota ee dalka Maraykanka, wuxuu talo usoo jeediyey xaaskiisa Xaliimo Ibraahim iyo gabadhiisa Maryan, wuxuu u sheegey in waligiis uu ku riyoonayay in uu dalkiisa hooyo ku laabto oo uu wax u qabto.
Sida uu qorey wargeyska Star Tribune ee kasoo baxa Minnesota, dad badan oo aqoonyahano ah, lehna xirfado kala duwan ayaa kasoo noqonaya dalka Maraykanka kuna soo laabanaya Soomaaliya si ay dalkooda wax ugu taraan. Wuxuu wargeyska soo xigtey dad kala duwan oo hogaamiyeyaasha Soomaalida Minnesota kuwaasi oo shaki galiyey in dilka Cabdullaahi Canshuur in ay Alshabaab ka dambeysey.
Sadiiq Warfaa waa agaasime ku xigeenka Global Somali Diaspora oo ah urur ay ku mideysanyihiin qurba-joogta Soomaaliyeed , wuxuu ka shaqeeyaa dhiirogalinta in dadka xirfadlayaasha ah ee aqoonta leh ay ku laabtaan Soomaaliya.
Wuxuu sheegey in uu garanayo illaa 100 qof oo xirfadyahano ah oo ku laabtay Soomaaliya.
Intii Injineer Canshuur uu ku noolaa Soomaaliya waxa uu ka shaqaynayay dib u hawlgalinta nidaamka bulaacadaha ee dowladda hoose ee Muqdisho. “Wuxuu go’aansaday in xirfadiisa looga baahanyahay dalkiisii hooyo, sidaasi ayuuna ugu laabtay Soomaaliya”. Ayuu yiri Sadiiq.
Fartuun Wali oo ka tirsan ururka Isuroon ee ka shaqeeya caafimaadka dumarka Soomaaliyeed ee dalka Maraykanka ayaa sheegtey in ay horey u tagtay Soomaaliya, sanadka dambana ay ku laaban doonto.
‘Waxaan dooneynaa in aan Soomaaliya ka hirgalino mashruuc lagu
caawiyo hooyooyinka uurka leh, waxaan ognahay in 10kii dumar ah ee ku dhala Soomaaliya, mid ka mid ah ay dhimato” ayay tiri Fartuun.
Injineer Canshuur waxa uu ka shaqaynayay hawlaha maamulka dhismaha magaalada St. Paul, wuxuu shahaada koowaad ka qaatay jaamacadda Muqdisho, halka tan Masters-ka ah uu ka qaatay jaamacadda California. 1991 ayuu Soomaaliya ka qaxay isaga oo ku noolaa dalalka kala ah Itoobiya, Masar iyo Kenya, kadib xaaskiisa ayaa 1996-dii tagtay Maraykanka, kadibna qoyska intiisa kale ayaa oga dabo tagay halkaasi.
Qoyskiisa waxa ay sheegeen in uu ahaa nin dadka aad u jeclaayeen, iyada oo aaskiisa ay ka qeybgaleen illaa 500 qof.